Thumela okuqukethwe kwakho kwe-iPhone ku-TV ngaphandle kwe-Apple TV | Izindaba zamagajethi
Umbulali Uviniga | | Isithombe
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngikutshele nge-iMediaShare, uhlelo lokusebenza olusivumela ukuthi sibonise izithombe namavidiyo wethu owathandayo kuthelevishini yethu ngeChromecast noma i-SmartTV. Namuhla sizokhuluma ngolunye uhlelo lokusebenza olusanda kuvuselelwa ku-App Store: AllCast. Ngenxa yobuchwepheshe I-Apple AirPlay singakhombisa okuqukethwe kwidivayisi yethu kumadivayisi we-Apple TV naku-Google Chromecast. Lokhu kungasisiza, ngokwesibonelo, ukufinyelela bukela i-tv online mahhala ngesiSpanish.
Uma ungahleleli ukuthenga idivayisi yalolu hlobo, kodwa Uma ungathanda ukukhombisa okuqukethwe kwidivayisi yakho kwi-Smart TV yakho yasekhaya, singasebenzisa uhlelo lwe-AllCast, esingathumela ngayo izithombe, amavidiyo kanye nomculo wethu owuthandayo ngqo ku-TV ngaphandle kwesidingo salezi zinsiza.
I-AllCast iyahambisana iyahambisana nama-Smart TV amaningi akhona njengamanje esemakethe (LG, Sony, Samsung, Panasonic…), ne-Apple TV neChromecast, ibuye ihambisane ne-Amazon Fire TV, Roku, Xbox 360, Xbox One ne-WDTV. Njengokungathi lokho bekunganele, i-AllCast futhi isivumela ukuthi sithumele okuqukethwe esikugcine ku-Google +, kuDropbox, ku-Instagram naku-Google Drayivu ku-TV.
Kepha ukusetshenziswa kwayo akukhawulelwanga kokuqukethwe yi-iPhone yethu noma i-iPad kodwa futhi singathumela okuqukethwe esikugcine kuseva yethu ye-multimedia, Plex ngokwesibonelo, kwi-Smart TV yethu uma ingenalo uhlelo oluhambisanayo. Ukuze usebenzise lolu hlelo lokusebenza, i-TV ne-iPad kumele zixhunywe kunethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi.
Uma sichofoza kuvidiyo noma esithombeni okukhulunywa ngaso, kuzokhonjiswa iwindi lapho idivayisi esifuna ukuyikhiqiza izokhonjiswa okuqukethwe, kufanele nje sicindezele idivayisi ekhethiwe futhi sikujabulele esikrinini esikhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » Sakaza okuqukethwe kwakho kwe-iPhone ku-TV ngaphandle kwe-Apple TV
ULuis Arias kusho
Ku-Smart TV yami izicelo zombili ezishiwo zasebenza kahle. Mina, i-AllCast ayisebenzanga uma kudlalwa izingoma ezisuka ocingweni lwami ku-tv yami, kepha ngokuqondene nezithombe namavidiyo, ibizidlulisela ngokushelelayo .. kungenjalo iMediaShare kepha noma kunjalo ngithole lolu hlelo lokusebenza kangcono, ngoba kulo Ngingawenza kabusha umculo wami ngaphandle kwezinkinga nakho konke okunye ngokufanayo.
Phendula uLuis Arias
38 izandiso ze-Chrome kusuka ngo-2014 ozoqhubeka ukuzisebenzisa ngo-2015
Ikhodi yesaphulelo ye-PlayStation Store isiyatholakala